एकैदिन १२९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित संख्या ९ सय नाघ्यो – Khabar Silo
१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा बुधबार एकैदिन १२९ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, धरान, विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा, दाङ, पोखरा र सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा एकैदिन यति धेरै संख्‍यामा संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै कुल संक्रमित संख्या ९०१ पुगेको छ ।
कोसी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका १७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । हेटौंडामा भएको परीक्षणमा रौतहटका ७ सहित ८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका ४ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । दाङमा भएको परीक्षणमा रुकुम पूर्वका ३, दाङका १५ गरी १८ जनामो पोजेटिभ देखिएको हो ।
बाँकेको भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा १६ जना पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३८ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
थपिए ११४ कोरोना संक्रमित, कुल संख्या ८८६
बुधबार कर्णालीमा पनि १५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । वीरेन्द्रनगरको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट १५ जनामा पोजेटिभ देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौँको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको १८ हजार रोपनीमा जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गरिने भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ एवं शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं ९ भित्रको करिब २४ हजार रोपनी जग्गामध्ये १८ हजार रोपनी जग्गा एकीकरण […]
निषेधाज्ञा पहिलो दिन, यसरी छटपटिए मजदुर, मास्क लगाउँदा कोरोना भाग्ने भए किन लक्डाउन सरकार? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाण्डौ, बैशाख १६ । सरकारले आज देखि २ हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी गर्नु पुर्व लाखौं नेपालीहरुले काठमाण्डौ उपत्यका छाडेकाछन । काठमाण्डौ मै दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर आफ्नो जिविकाउपार्जन गर्ने ओखलढुङाका यी श्रमिकको गुनासो भने फरक छ । स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनुको साथसाथै हाम्रो दैनिकीमा सरकारको ध्यान जाओस भन्दै आक्रोसित बने । दिनभर […]
९ दिनमै कोरोना जितेका ४६ वर्षीय पुरुष भन्छन्ः हल्ला धेरै भए पनि निको हुने रहेछ
भक्तपुरका दुवै संक्रमितको पहिलो रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’